Shiinaha Kartoon laba geesood ah mashiinka calaamadeynta shaashadda shaashadda iyo Warshadda | S-conning
Mashiinka calaamadeynta shaashadda shaashadda kartoonka laba geesood ah
CODSIGA:Sanduuqyo laba jibbaaran oo kala duwan, calaamadeynta hal iyo labalaab geesoodka & xirashada
CODSIGA: Sanduuqyo laba jibbaaran oo kala duwan, calaamadeynta hal iyo labalaab geesoodka & xirashada
•Ku xariji xamuul xawaare leysku habeeyay si aad u ilaaliso xasiloonida kartoonada markaad calaamadeynayso. Waxay hubisaa in calaamadeynta ay ku egtahay kartoonada miisaanka fudud.
•Bixinta sanduuqyada kala-qaybinta, cadaadiska sare iyo hagaajinta, calaamadeynta, calaamadda haynta geeska iyo calaamadda calaamadda calaamadda dheecaanka iyo calaamadda diidmada iyo shaqooyinka kale, si loo hubiyo in la shaabadeeyo oo la calaamadeeyo si sax ah, si markaa dadka isticmaala loo xaqiijiyo inay ku xirmaan mashiinka kartoonka, si loo ogaado xawaare sare hawlgalka;
•Xiritaanka ilaalinta hufan ee ikhtiyaariga ah, oo leh badhanka badhanka badbaadada, si loo hubiyo nabadgelyada wadaha.
-Ka qaadashada nidaamka calaamadeynta adeegaha xawaaraha sare leh.
-Waxaa lagu dabaqi karaa noocyada kala duwan ee calaamadeynta kartoonka, oo leh hal dhinac ama shaabad xagal ah iyo laabashada geeska.
- Xawaaraha xasilloon: 0-200 kumbiyuutar / daqiiqad.
Nidaamka calaamadeynta saxda ah ee saxda ah, oo leh dulqaad sumadeed ± 1mm.
- Nidaamka xakamaynta caqliga si loo hubiyo in uusan duuduubku ka jirin marka la calaamadeynayo iyo inaysan lahayn goobooyin hawo ah oo loogu talagalay sumadaha hufan.
- Habka sixitaanka ee silsilad isku mid ah si loo hubiyo wareejinta kartoonka xasiloon iyo booska saxda ah.
- Mashiinka oo dhameystiran wuxuu korsadaa SUS304 ahama iyo A6061
daawaha aluminium ee sarreeya, oo leh muuqaal wanaagsan iyo u hoggaansamida shuruudaha qeexidda ee cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS iyo CE.
Waxqabadka Dheeraadka ah
Mashiinka Calaamadeynta Sanduuqa oo macquul ah oo naqshad jilicsan oo ku habboon calaamadeynta alaabooyin kala duwan.
Diyaarsi karaa diyaarad shey kala duwan, ballaadhin kara kala duwanaanta arjiga.
Ku darista codsadayaasha calaamadda dheeriga ah waxay garan karaan usha laba-laabista iyo ku celcelinta calaamadda usha, Waxaan ku dari karnaa qaybo kala duwan oo loogu talagalay ogaanshaha iyo diidmada hawsha iyadoo loo eegayo baahidaada.
Suunka isku haysa ee firfircoon .ku hubso meelaynta calaamadeynta si sax ah.
• Dhererka sumadda Smart-ka ayaa loo dejiyay si dhakhso leh loogu gaaro booska saxda ah ee calaamadda miiska.
• Calaamadda la la'yahay ayaa ka hortageysa alaabta la calaamadeeyay si loo hubiyo saxnaanta sheyga inta wax soo saarka iyo fulinta nidaamka wax soo saarka QC.
• Miis dhisme ayaa si xor ah u socon kara oo la socon kara tirada alaabada loo calaamadeeyay si loo xakameeyo wax soo saarka.
• Wax soosaarka horudhaca wax soo saarka ee sumadeeyaha uu si otomaatig ah u istaagayo markii tirooyinka la doonayo ee alaabada la calaamadeeyay si loo maareeyo wax soo saar hufan
Cabbir (L) 2400 x (W) 1550x (H) 1660mm
Cabbirka weelka (H) 20-100mm (W) 30-210mm (L) 100-200mm
Xawaare P200pc / m
Hore: Mashiinka Calaamadeynta Dhalada Wareegga Labaad ee Flat Square
Xiga: Mashiinka xirxira dhalada dareeraha ah
S-Conning Xawaare Sare oo Lagu Tuuri Karo Isku Xidh ...
Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,